Ichokwadi here kuti zvinyorwa zvemashure endemic zvino ndeye goldmine?
Contextual backlinks ingangodaro chinhu chakakosha zvikuru maererano nekuvakwa kwekubatanidzwa mu Search Engine Optimization (SEO). Chinhu chacho ndechekuti havasi hukama huse hunosikwa hwakaenzana - huri nyore, injini huru yekutsvaga (seGoogle pachayo, pamwe neye Yahoo neBing) iri kupa hureru hwemamwe marudzi e-backlinks. Pakati pevamwe, zvinyorwa zvakare kumashure zvakagadziriswa pamba pebhizimusi renyu rebhizimusi rekushandisa bhizinesi kana bhurogi nguva dzose ichange iine hukuru hunokosha nehukuru hwakakura seSeO zvinangwa.
Saka, iwe wakarurama - zvinyorwa zvakare kumashure zvino zvinozivikanwa semikana chaiyo yegoridhe. Vamwe vanhu vari kutovatumidza kuti "Girasi Tsvene yeSEO. "Sei vachikoshesa kuti zvakanyanya? Zvichida nokuti kana iwe uri pakati pevaya vanoda chibvumirano chebhuku rewebhu kana bhulogi kukura mukududzirwa - rudzi urwu rwehukama ndizvo chaizvo zvaunoda kufara mberi nekukurumidza kwakadaro.
Chii Chinogadzira Zvinyorwa Zvokudzokera shure Nokududzira?
Kufunga nezveshoko rose reIndaneti Retextual Backlinks panguva yakareba, ngatiedzei kuputsa shoko neshoko kuti tinzwisise zviri nani. Chokutanga pane, Homepage ndeye peji yepaIndaneti yakasiyana-siyana iyo inofanirwa kuongorora zvinyorwa pane imwe nzvimbo kana bhulogi. Chechipiri, Chinyorwa chekubatanidza chinoreva kuti chinofanira kunge chinowanika kuiswa mukati pejiji chemukati - kuonekwa mumagwaro akanyorwa zviripo, zvinyorwa zvekare zvakasara hazvisi nzvimbo yezvimwe zvinyorwa zvepamu zviduku zviduku zvinowanikwa nzvimbo-yakawanda. Uye chechitatu, backlink iri mu SEO inomiririra kunze (kana zvisina kudaro, inbound link) iri pawechitatu-webhusaiti yebhuku kana bhurogi uye uchitaura pamapeji ako pachako.
Vanoshanda sei paIndaneti?
Kubva pakuona kwekuwedzera SEO, zvinyorwa zvekare zvakakonzerwa zvakananga pamba pekutanga ndizvo zvinonyanya kushandiswa zvinotyaira yega webhusaiti kana bhutiro yekugadzirisa kwekutsvaga paIndaneti pamwero. Chinhu ichi ndechokuti zvinhu zvose pamusoro pekushanda kwavo mu SEO zvakajeka - zvinyorwa zvekare zvakabva shure kune bhodhi kuenda kuGoogle, nokuti zvinowanzobatanidzwa zvakanaka mune zviri mukati uye zvinotarisa. Panguva imwecheteyo, iyo chaiyo yokuti mamiriro ezvinhu akadaro kumashure akaumbwa pajiji yewebhu yakakura yepaiti kana bhurogi iri kuvapa kunyange kukura kukuru. Sei? Zvichida nokuti kuiswa pamba pepaimba, zvakadaro zvinyorwa zvekare zvinokuendesa iwe webhutta yepamusoro - pane imwe chete yemusha, iyo "gedhi" inopfuurirwa nemunhu wese anoshanyira pawebsite kana blog kuti awane zvinyorwa pane imwe neimwe peji.
Pakupedzisira, ramba uchiyeuka kuti zvinhu zvose pamusoro pezvikwangwani zvepamba remhuri zvichashanda chete pamasimba ehurumende ane simba uye mapeji ewebhu ane PR. Ndinoreva kuti mushure mega rega rekink mune zvakawanda zvakanyanya kwete kubva pakasvika zvakananga pane peji, asi nekuti webhusaiti yose (kana bhulogi) inokoshawo zvakare Source . Saka, ndechipi chinhu chinokosha chinodiwa kuti uwane zvakanyanya kubva mumamiriro ekutekorora kwemashoko ako - peji rega rega pachako, kana zvichida webhusaiti yose yakatorwa pachiyero? Zvose!